အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ညို့ယူတတ်တဲ့ အမူအရာလေးတွေပေါင်းစပ်ပြီး အလန်းလွန်နေတဲ့ ယွန်းမီမီကျော်… – Cele Cupid
EverBest M | September 19, 2021 | Celebrity | No Comments
ဆက်ဆီ ကျကျ နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိ လွန်းတဲ့ မော်ဒယ်လ်မ လေး ယွန်းမီမီကျော်ရဲ့ အလန်းစားပုံလေး တွေကလည်း ပရိသတ်တွေကြား မှာ ရေ ပန်းစားလူကြိုက် များ နေပါ တယ် ။ လတ်တလော မှာလည်း အသား ကပ် အကျႌလေးဝတ်ကာသွယ်လျကျစ်လစ်တဲ့ သူမ ရဲ့ အလှတရား တွေပေါ်လွင် နေတဲ့ပုံလေးတွေ ကိုဖော်ပြထားရာ မိမိုက် လွန်းနေ တာ ကြောင့် ပရိသတ်ကြီး အ တွက် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် ။
ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား ပြေပြစ် လှပပြီး အရမ်းကိုချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ယွန်းမီမီကျော် ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော်။ social media လေ ာက မှာ photo model တစ် ယောက် အဖြစ်ရပ်တည်နေ တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အချစ် ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကြော်ငြာ တွေ photo shotting တွေ လက်ခံရိုက် ကူးနေတာ ဖြစ်ပြီး တစ်ကယ့် ကို ထိပ်တန်း မော်ဒယ်လ် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ညို့အား ပြင်း တဲ့ အလှတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အလှနတ် သမီးလေးလို့ တင်စား ရင်လည်း မှားမယ်မ ထင်ပါဖူးနော်။ချစ်စရာ ဟန်ပန်အမူ အရာလေးတွေရယ် အမိုက်စား ခန္ဓာ ကိုယ်လေးရယ် ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ သူမကတော့ အခုချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို လက်ခံပိုင် ဆိုင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အားလုံးပဲ ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကပ်ဆိုးကြီးတွေဘေးကနေ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် … 🙏 🙏 🙏 ။ သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like နဲ့ Shareလေးလုပ်ပေးသွားပါအုံးနော် …. ။
Source & Photo Credit : Yoon Mhi Mhi Kyaw Facebook Account
ဆက္ဆီ က်က် နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ လြန္းတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္မ ေလး ယြန္းမီမီေက်ာ္ရဲ့ အလန္းစားပုံေလး ေတြကလည္း ပရိသတ္ေတြၾကား မွာ ေရ ပန္းစားလူႀကိဳက္ မ်ား ေနပါ တယ္ ။ လတ္တေလာ မွာလည္း အသား ကပ္ အက်ႌေလးဝတ္ကာသြယ္လ်က်စ္လစ္တဲ့ သူမ ရဲ့ အလွတရား ေတြေပၚလြင္ ေနတဲ့ပုံေလးေတြ ကိုေဖာ္ျပထားရာ မိမိုက္ လြန္းေန တာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီး အ တြက္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ ။
ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳး အစား ေျပျပစ္ လွပၿပီး အရမ္းကိုခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ယြန္းမီမီေက်ာ္ ကိုသိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ ေနာ္။ social media ေလ ာက မွာ photo model တစ္ ေယာက္ အျဖစ္ရပ္တည္ေန တာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ႀကီးရဲ့ အခ်စ္ ကိုရယူပိုင္ဆိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေၾကာ္ျငာ ေတြ photo shotting ေတြ လက္ခံရိုက္ ကူးေနတာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ကယ့္ ကို ထိပ္တန္း ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။
ညိဳ႕အား ျပင္း တဲ့ အလွေတြ နဲ႔ ပုရိသေတြ ကို ဖမ္းစားနိုင္တဲ့ အလွနတ္ သမီးေလးလို႔ တင္စား ရင္လည္း မွားမယ္မ ထင္ပါဖူးေနာ္။ခ်စ္စရာ ဟန္ပန္အမူ အရာေလးေတြရယ္ အမိုက္စား ခႏၶာ ကိုယ္ေလးရယ္ ပိုင္ဆိုင္ထား တဲ့ သူမကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကို လက္ခံပိုင္ ဆိုင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အားလုံးပဲ ယခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကပ္ဆိုးႀကီးေတြေဘးကေန ေက်ာ္လႊားနိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ … ။ သေဘာက်ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ Like နဲ႔ Shareေလးလုပ္ေပးသြားပါအုံးေနာ္ …. ။
လျှံထွက် နေတဲ့ အမွှာပူး လေးကို အထင်းသား တွေ့မြင်အောင် ချပြလိုက်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို
ကြည့်ရှုသူတိုင်း အံ့သြသွားစေမယ့် အရမ်းကိုမိုက်ပြီး ဆက်ဆီကျကျလေးကပြလိုက်တဲ့ သံစဉ်မောင်ရဲ့ ဂွတ်ရှယ်ဗီဒီယိုလေး
ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြွေဆင်းသွားမယ့် ဆွဲဆောင်အား ပြင်းလွန်းနေတဲ့ ချီချီ ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK VIDEO လေး